Amathuluzi we-PC we-thermo
Ukuxazulula izinkinga 0x80070422 ku-Windows 10
Ukusetshenziswa kwe-ABC ukuhlaziywa ku-Microsoft Excel
Izihloko Interesting - December 12,2019
Landa i-Master 6.16.1.1595
I-Microsoft Outlook 2016
Izihloko Interesting 2019
Sesha futhi ulandele abashayeli be-HP Pavilion DV6
Ama-laptops ngemuva kokuvuselela uhlelo lokusebenza ngeke akwazi ukusebenza ngamandla angenayo abashayeli bokungena. Wonke umsebenzisi onqume ukwenza ukubuyiswa noma ukuthuthukiswa kunguqulo entsha yeWindows kufanele azi ngalokhu. Kulesi sihloko sizoxoxa ngezindlela eziyisisekelo zokufaka isofthiwe ye-HP Pavilion DV6 laptop.
Sihlela amawijethi ekhasini lokuqala le-Yandex
Ungabuyisa kanjani inguqulo endala ye-Yandex Browser?
Indlela yokwandisa ubukhali ku-Photoshop
Unganika kanjani amandla i-AHCI imodi ku-Windows 10
Indlela yokulungisa isenzo ku-Photoshop
3000 zezinwele zezinwele 1
Ungashintsha kanjani igama lekhompyutha ye-Windows 10
Ukuhlolwa kwevidiyo ye-intanethi
Guqula amafayela we-FLAC alalelwayo ku-intanethi ku-intanethi
Dlulisa idatha kusuka ku-Android eyodwa kuya kwenye
I-Astra S-Nesting 3.0
Ungasetha kabusha kanjani izinkampani zendawo nezinqubomgomo zokuphepha ku-Windows
Ungahlola kanjani imakrofoni kuma-headphones?
Ungeza kanjani isithombe ku-Yandex. Izithombe
Indlela yokudlulisela amathrekhi ku-router evela eRostelecom. I-GameRanger isethingi
Lesi sihloko sizobe sibheka ukuthi singayithuthukisa kanjani amachweba e-router esuka eRostelecom ngesibonelo sohlelo oludumile olufana ne-GameRanger (olusetshenziselwa imidlalo ye-intanethi). Ngiyaxolisa kusengaphambili ngokungalungi okungenzeka ukuthi kunemininingwane (hhayi isazi kule nsimu, ngakho ngizozama ukuchaza konke ngolimi lwami).
Guqula i-XML ku-XLS
Amadokhumenti e-Accounting ngokuyinhloko asakazwa kumafomethi e-Microsoft Office - i-XLS ne-XLSX. Noma kunjalo, ezinye izinhlelo zikhishwa imibhalo ngendlela yama-XML amakhasi. Lokhu akusiyo njalo elula, futhi amatafula amaningi e-Excel asondelene futhi ajwayelekile. Ukuqeda ukuphazamiseka, imibiko noma i-invoyisi ingaguqulwa kusuka ku-XML kuya ku-XLS.
Abathuthukisi Impi Yonke Impendulo iphendule ukugxeka abalandeli
Abathuthukisi beMpi Yonke: Isu lomlando we-Rome II libeke amazwana ekuphenduleni okungalungile kwabalandeli begeyimu ekubukeni okuvamile kaningi kwabaphathi besifazane. I-studio Creative Assembly esitatimendeni sayo ithi iphesenti lokushiya abaphathi bezinsikazi ezitholakalayo ekuqashweni kwezibuyekezo zakamuva, naphezu kwemizwa yokuziphendulela yabadlali, ayishintshiwe.
Ungasusa kanjani ikhasi lokuqala kusiphequluli se-Google Chrome
Umsebenzisi ngamunye wesiphequluli se-Google Chrome angazikhethela ngokuzimela ukuthi amanye amakhasi azoboniswa ekuqaleni noma ngabe amakhasi avulwe ngaphambilini azolayisha ngokuzenzekelayo. Uma uqala isiphequluli kusikrini se-Google Chrome, sivula ikhasi lokuqala, sizobuka indlela yokususa ngayo.
Guqula i-MP3 ibe yi-WAV
Ukusebenza ngamafayela alalelwayo kuyingxenye ebalulekile yokusebenzisa ikhompyutha ngumuntu wanamuhla. Cishe nsuku zonke ifayela elilalelwayo litholakala kumadivayisi adlaliwe noma ahlelwe. Kodwa ngezinye izikhathi awudingi nje ukulalela ukurekhoda, kodwa ukuyihumusha ibe enye ifomethi. Indlela yokuguqula i-MP3 kuya ku-WAV Ngokuvamile ohlelweni lwe-Windows, phakathi kwemisindo ejwayelekile, ungabona ukurekhodwa komsindo kwifomethi ye-WAV, okuyinto umsindo ongaxhunyiwe, ngakho-ke unemfanelo ehambisanayo nevolumu.
Ukufaka ama-VirtualBox Guest Additions
Izengezo ze-VirtualBox zezindwendwe (izisetho zokufaka izivakashi zesistimu) iphakethe lesandiso esisungula kwisistimu yokusebenza yezihambeli futhi sithuthukise amandla ayo okuhlanganiswa nokuxhumana nomphathi (yangempela) OS. Izengezo, isibonelo, ikuvumela ukuthi uxhume umshini obonakalayo kunethiwekhi yangempela, ngaphandle kokuthi akunakwenzeka ukushintshanisa amafayela ngokudala amafolda abelwe, kanye nokufinyelela kwi-Inthanethi ebonakalayo.
Indlela yokusebenzisa i-Snapchat ku-iPhone
Ukufaka ikhasi lakho le-Facebook
Izindlela ezintathu zokugudlulela amakhredithi we-pixel ku-Photoshop
Kwezinye izimo, lapho sicubungula izithombe ku-Photoshop, singathola "amakhredithi" ahlambalaza amaphikseli eceleni komjikelezo wento. Ngokuvamile lokhu kwenzeka ngokunyuka okuqinile, noma ukusika izinto ezincane. Kulesi sifundo sizoxoxa ngezindlela eziningana ukuthi singasusa kanjani amaphikseli ku-Photoshop.
Shintsha ikheli le-imeyili ku-Gmail
Ukushintsha ikheli lakho le-imeyili ku-Gmail akunakwenzeka, njengamanye amasevisi awaziwayo. Kodwa ungakwazi njalo ukubhalisa ibhokisi lemeyili elisha bese uliqondisa kabusha. Ukungakwazi ukuqamba kabusha i-imeyili kungenxa yokuthi uzokwazi kuphela ikheli elisha, futhi labo abasebenzisi abafuna ukukuthumela incwadi bazobhekana nephutha noma bathumele umlayezo kumuntu ongekho.
Imiyalo yokwakha iphuzu lokubuyisela i-Windows 10
Wonke umsebenzisi we-PC ngokushesha noma kamuva ubhekene neqiniso lokuthi uhlelo lokusebenza luqala ukukhiqiza amaphutha, okungenayo isikhathi sokubhekana nayo. Lokhu kungase kwenzeke njengomphumela wokufaka i-malware, abashayeli bezinkampani zangaphandle abangahambisani nesistimu, nokunye okunjalo. Ezimweni ezinjalo, ungakwazi ukuqeda zonke izinkinga ngokusebenzisa iphuzu lokubuyisela.
Amahora kuya kwemizuzu ukuguqulwa ku-Microsoft Excel
Uma usebenzisa isikhathi ku-Excel, ngezinye izikhathi kunenkinga yokuguqula amahora kuya kumaminithi. Kungabonakala kuwumsebenzi olula, kodwa ngokuvamile kubonakala kuningi kakhulu kubasebenzisi abaningi. Futhi le nto iyingxenye yokubala isikhathi kuloluhlelo. Ake sibone indlela yokuhumusha amahora amaminithi ku-Excel ngezindlela ezihlukahlukene.
Izinhlelo zokubalwa kwekhalori
Abantu abaningi baphila ngendlela enempilo, bavame ukuzivocavoca futhi badle ngokufanele. Ukuze usize ukubala inani lamakhalori abhalisiwe futhi ashiswe ngosuku, izinhlelo ezikhethekile zibizwa, okuzoxoxwa kulokhu kulesi sihloko. Sithathe abameleli abaningana, okuyinto ngayinye efanelekile ngezinhloso ezahlukene.
Ukuxazulula iphepha eligcinwe kuphrinta
Abanikazi bedivaysi yokuphrinta bangase babe nenkinga lapho iphepha ligaxekile kuphrinta. Esimweni esinjalo, kunendlela eyodwa kuphela yokuphuma - ishidi kufanele litholakale. Le nqubo akuyona into enzima futhi ngisho nomsebenzisi ongenalwazi uzobhekana nayo, ngakho akudingeki uxhumane nesikhungo senkonzo ukuxazulula inkinga.
Ukuhlanza ukubhalisa nge-CCleaner
I-CCleaner iyithuluzi eliphelele le-Windows, elikuvumela ukuba ugcine ikhompuyutha yakho "ihlanzekile", imsindise kumafayela angadingekile abangela ukwehla ekusebenzeni kwesistimu. Enye yezinqubo ezibaluleke kakhulu ezingenziwa kule nqubo ukuhlanza ebhukwini, futhi namhlanje sizobheka ukuthi lo msebenzi ungenziwa kanjani ku-CCleaner.
Qalisa isevisi yomsindo ku-Windows 7
Isevisi eyinhloko, ephethe umsindo kuma-computer asebenza nge-Windows 7, "iWindows Audio". Kodwa kwenzeka ukuthi lesi sici sivaliwe ngenxa yokuhluleka noma kumane kungasebenzi kahle, okwenza kube nzima ukulalela umsindo kwi-PC. Kulezi zimo, kubalulekile ukuqala noma ukuqala kabusha.
Ukuqedwa kwe-MS Igama iphutha: "Iyunithi engavumelekile yokulinganisa"
Abanye abasebenzisi be-Microsoft Word ngenkathi bezama ukuguqula ukuhlukaniswa komugqa babhekene nephutha elinokuqukethwe okulandelayo: "Iyunithi yesilinganiso ayilungile." Kubonakala efasiteleni lokuphuma, futhi lokhu kuvame ukukwenzeka ngokushesha ngemuva kokubuyekeza uhlelo noma, ngokuvamile, uhlelo lokusebenza.
Izinhlelo zokurekhoda umsindo kusuka kumakrofoni
Ukuqopha umsindo kusuka kumakrofoni kuyindaba elula. Ngaphezu kwalokho, izinhlelo ezingaqopha umsindo, zibhalwe eziningi kakhulu. Isofthiwe enjalo ingase ihluke kakhulu kumncintiswano, kodwa ngesikhathi esifanayo, ihlangabezana nemisebenzi yayo kahle. Cabangela abamele "abanamandla" kakhulu be-software yokuqopha umsindo.
Faka isibonakaliso esengeziwe ku-MS Word
Ngokuvamile, ngenkathi usebenza ku-Microsoft Word, kubalulekile ukubhala umlingisi edokhumenti engekho ikhibhodi. Njengoba akubona bonke abasebenzisi abakwazi ukwengeza uphawu oluthile noma uphawu, abaningi babo bafuna isithonjana esifanele kwi-intanethi, bese beyikopisha bese bayinamathisela kudokhumenti.
Kuthiwani uma inqubo yeSistimu ilayisha inqubo
I-Windows yenza inamba enkulu yezinqubo zangemuva, ngokuvamile ihlasela ijubane lezinhlelo ezibuthakathaka. Ngokuvamile, umsebenzi we- "System.exe" ulayisha iprosesa. Khubaza ngokuphelele akunakwenzeka, ngoba ngisho negama ngokwayo lithi umsebenzi uyisistimu. Kodwa-ke, kunezindlela ezimbalwa ezilula zokusiza ukunciphisa umthwalo womsebenzi wenqubo yeSistimu ohlelweni.
Ukurekhoda ividiyo kusuka kwikhompyutha
Sesha bese ulanda umshayeli we-FT232R USB UART
Ungasusa kanjani izithombe kusuka ku-iPhone, iPad noma iPod nge-iTunes
Umhleli wezithombe GIMP: i-algorithm yokwenza imisebenzi esemqoka
Ungakhansela kanjani ukuphrinta kwiphrinta
I-Adobe Flash Player
I-3D House iyi-software yamahhala eyenzelwe abantu abafuna ukuklama ikhaya labo, kodwa abangenayo amakhono amaningi ezobuchwepheshe ekwenzeni imibhalo yephrojekthi. Umthuthukisi ubeka umkhiqizo wakhe kulabo abahlose ukwakha indlu futhi abafuni ukuchitha isikhathi behlola isofthiwe. Funda Okwengeziwe
Imiyalo yokudala i-flash bootable drive ku-Windows
I-Microsoft Access 2016
WindowsImpendulo yombuzoIzinkinga zokugembulaInethiwekhi ne-intanethiIzindabaIzihlokoIvidiyo nomsindoIZwiI-ExcelUkusebenza kweWindowsKwabaqalayoI-laptopUkulungisa nokubuyiselwaUkuphepha (amagciwane)Amadivayisi weselulaIhhovisiIziphequluliIzinhleloUkuhlanzwa kwekhompyuthaIOS ne-MacOSUkusesha kwe-IronDiskIzifufulaI-SkypeI-BluetoothAma-ArchiversAma-smartphoneAmaphuthaUmsindoAbashayeli
Copyright © 2019 Amathuluzi we-PC we-thermo
https://termotools.com zu.termotools.com © 2019